5 zvinyorwa zvinyorwa nezvekusurukirwa | Bezzia
5 zvinyorwa zvinyorwa nezvekusurukirwa
Maria vazquez | 09/09/2021 12:00 | tsika nemagariro
Autumn inguva inokukoka iwe kuti uverenge. Mushure mehupenyu hwakabatikana hwemagariro muzhizha uye nehusimbe hunokonzerwa netembiricha yakakwira, vaverengi vanowana matsutso nguva yakakodzera yekuzvinyudza mukuverenga kwakadzama uye kwakanyorovera. Uye hongu, zvakare vaparidzi panguva ino vanodzokera kune yavo yenguva dzose maitiro uye pamwe navo ezvinyorwa zvinyorwa.
Kufambisa iyo mabhuku evaparidzi, Isu takaunganidza zvinyorwa zvishanu zvekunyora izvo vatambi vayo, nezvikonzero zvakasiyana, vanorarama nguva yekusurukirwa. Kuverengwa kwatinotenda kwakakodzera kwazvo panguva ino yegore uye kwakave kana kuchazoburitswa mumwedzi uno waGunyana.
1 Kunyengera Island
2 Kuwa Quartet
4 Mukadzi nekatsi mbiri
Munyori: Paulina Flores
Muparidzi: Seix Barral
Mushure mekusiya basa raunovenga, Marcela anotiza kubva kuhupenyu hwake muSantiago de Chile kunoshanyira baba vake muPunta Arenas, muPatagonia. Ikoko anowana kuti Miguel, uyo waane hukama hwakaomarara naye, ari kuvanda murume wechidiki wechiKorea akanunurwa neboka revaredzi mugungwa. Akaparadzaniswa kuseri kwemadziro ekunyarara uye nenyaya inoshungurudza, Lee chishamiso chekusunungura, mupukunyuki mavanotendeuka kuti vasagadzirise kupokana kwavo.
Akafuridzirwa nezviitiko chaizvo zvevafambisi vengarava vanoisa hupenyu hwavo munjodzi nekusvetuka kubva mungarava dzefekitori dzinofamba nenzira yeStrait yeMagellan, Nyengeri Island inotaura nyaya yevatizi vatatu vanotsvaga hutiziro vasingaregi. Kutaura nezvenzvimbo yazvino yekushandiswa kwemakungwa nemamiriro ekushanda asingafungidzike muzana ramakore reXXI, iyo novel inoyambuka muganho wechokwadi kuti usvike pamhenderekedzo nyowani, iyo umo kusurukirwa, kukanganisa uye kupererwa kunogona kuramba kuri chiitiko.
Yakanyorwa ine cinematic beat Mugari wenhaka kuKorea cinema, senhetembo sezvo iri mhirizhonga, Isla Decepción ndiyo bhuku rekutanga rakamirirwa kwenguva refu naPaulina Flores, anokunda mubairo waRoberto Bolaño, akasarudzwa naGranta semumwe wevanyori vakanakisa muSpanish uye bhuku rake rekutanga, Qué shame , yakarumbidzwa pamwe chete nevatsoropodzi uye yakashandurwa pasi rese.
Munyori: Barbara pym
Muparidzi: Gatopardo ediciones
Barbara Pym akanyora Autumn Quartet asina tariro yakawanda kuti ichaona mwenje wezuva. Yakanga isati yaburitswa kwenguva yakareba, tichifunga nezvevagadziri vayo kuti yakanga yakasungirirwa mune yakadyiwa nezvipfukuto uye zvishoma tsika yekutengesa. Mushure mekunge mudetembi Philip Larkin nemutsoropodzi Lord David Cecil vatora kukosha kwavo, Pym akawana muparidzi webhuku rino, iro rakazove Booker Mubairo wekupedzisira muna 1977 uye yakamuisa iye semumwe wevanyori vanoverengeka uye vanodiwa veChirungu vezana ramakore rechiXNUMX.
Ivo protagonists veino novel vanoshanda muhofisi imwe chete uye vanotarisana nematsutso ehupenyu hwavo vakanyururwa vari vega. Letty ave kuenda pamudyandigere asina kuwana rudo. Marcia ane eccentric uye akatsamwa hunhu, hunhu hwakave hunosimbiswa kubvira iye aine mastectomy. Edwin akafirwa zvakanyanya nekuenda kumhemberero dzechitendero, naNorman misanthrope yakapihwa kunyomba. Ivo vese vanorarama vakamiswa pakati pekurangarira kwavo nezvehondo, chipo chavasinganzwisise - iyo London yedombo uye roll uye miniskirt - uye ramangwana rakajeka. Vese vanoramba, zvakadaro, mukuwana tariro munzanga inofuratira kana kuvanzwira tsitsi.
Munyori: Carlota Gurt
Muparidzi: Asteroid Mabhuku
Rakaziviswa musi: 13/09/2021
Mei, mukadzi ane makore makumi mana nemaviri Akanyura mumuchato usingakendengi uye uyo achangodzingwa pabasa rake, akafunga kupotera mumba maakakurira, imba diki yepapurazi iri pakati pesango. Ikoko iye anozoedza kunyora iyo nyowani iyo yakamutambudza iye kwemakore achitarisana nezvake zvakapfuura, chipo chisina kunaka uye ramangwana rinokanganisa.
Iyi nhoroondo inhoroondo yekupandukira, nyaya yekusurukirwa kusapfidza yakataurwa mune inonakidza 185-mazuva ekuverenga. Kusurukirwa chii? Icho chaicho chinangwa kana chimiro chendangariro, chikomborero kana kupiwa mhosva? Chinhu chechokwadi chete ndechekuti hauzombobuda mukugara wega usina kukuvara.
Mukadzi nekatsi mbiri
Munyori: Ayanta Barilli
Muparidzi: Edhiyo Planeta
Rakaziviswa musi: 22/09/2021
Iye protagonist, chinyorwa chemunyori iye, anorondedzera uye anorondedzera nguva yekusurukirwa, inoratidzirwa nekurambana kwekunzwa uye kuenda kwevana vake, mumwe nemumwe achienda kwavasingakwanise kushanya.
Pakati pemwedzi iyi, achiperekedzwa chete nekitsi dzake mbiri, kunyora chichava chiito chega chekupokana zvinogoneka mukutarisana nedambudziko. Ichadzokorora nguva dzakakosha dzekuvapo kwake, dzinoonekwa kubva kune anosungirwa akasiyana maonero, umo mukadzi - anovawo mwanasikana, amai uye mudiwa - anozove murevi wenhema.
Kusateerera ndiko kuchave kujekesa kunovhenekera nzira yako.
munyori: Victor Català
Rakaziviswa musi: 29/09/2021
"Kusurukirwa kwake kwakakora ndokugwamba pakakomberedza mweya wake kunge polar gleba."
Mila, achangobva kuroorwa naMatias, murume waasingazive anosiya imba yake kuti amutevere kunzvimbo iri kure yakavakirwa pamusoro pegomo rakaoma. Paanosvika, achasangana naGaietà, mufudzi ane ruzivo, anonyemwerera uye akangwara, naAnima, mutengesi asina kunaka. Kusurukirwa kwakasimba uye zvisikwa zvinogara mairi zvinotungamira Mila kutora rwendo rwemukati pasina kudzoka.
Kusurukirwa, hunyanzvi hweCatalan tsamba, Yakaburitswa pakutanga kwezana ramakumi maviri, inoramba ichishamisa zvakanyanya mune zvese zvirimo uye chimiro. Nekudaro kudikanwa kweshanduro iyi, uko mudetembi uye muturikiri Nicole d'Amonville Alegría achinyatso dudzira muchiSpanish hupfumi hwakanyanya, kudzikamisa uye nhetembo zvinogara zviripo muchirevo chaCaterina Albert.
Zviripachena kuti hatina kuverenga chero eaya mabhuku ezvekunyora kunyangwe isu tine, kunyanya, vaviri vacho mumigwagwa yedu. Ko iwe? Ndeapi eaya mabhuku matsva anobata kutarisisa kwako? Unofarira here kuverenga nyaya dzakadai kana unofarira zvakavanzika kuverenga kana chimwe chakareruka uye chinotonhorera?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » tsika nemagariro » 5 zvinyorwa zvinyorwa nezvekusurukirwa
Yekutanga doormat yekugamuchira mumba mako
Matipi mashanu ekuchengetedza mbatya dzezhizha neshangu